थाहै नहुने रोग डिप्रेसन : कतै तपाई पनि यसको सिकार त हुनुभएको छैन ! – Saurahaonline.com
थाहै नहुने रोग डिप्रेसन : कतै तपाई पनि यसको सिकार त हुनुभएको छैन !
चितवन, २५ चैत । विश्व स्वस्थ्य संगठनले डिप्रेसन जिवनकालमा पुरुषमा १५ प्रतिशत र महिलामा २५ प्रतिशत सम्म हुने बताएको छ । डिप्रेसनको बिरामीलाई अनेक रोग लागेको भान हुन्छ । यो रोगमा केही बिरामी पटक पटक उपचारको शिकायत गर्ने, धेरै पटक जाँच गर्ने तर रोग नभेटिने हुन्छ । यो रोगमा केही बिरामीले मनको पिडा सहन नसकी आत्महत्या गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । एकै पटक धेरै लक्षण देखिने रोग नै डिप्रेसन हो ।
नेपालमा डिप्रेसन रोगका मुख्य कारणहरु पारिवारिक कलह, काममा असफलता, श्रीमान्को विदेश बसाई, प्रेममा वियोग, मानिस मृत्यु, व्यापारमा नोक्सानी, जागिर छाड्नु, बालक अवस्थामा आमाबाबुबाट टाढा रहनु,ु र राजनीतिक असन्तुलनको असर आदि पर्दछन् । कतिपय डिप्रेसन रोगका बिरामी राती निदाउदैनन् वा निद्रा नपर्ने हुन्छ । डिप्रेसनका बिरामीहरु आत्तिने खालको सपना देख्छन । धेरै डिप्रेसनका बिरामी आफुलाई असफल ठान्छन् र भविष्यप्रति निराशावादी हुन्छन् । कोही यौनक्रियामा कमी भयो भन्ने लक्षण लिई डाक्टर कहाँ आउछन् ।
डिप्रेसन रोग यकिन गर्न लक्षणहरु कम्तीमा २ हप्तासम्म रहनुपर्छ । महिलामा डिपे्रसन बढी हुने खास कारण थाह भएका नभएपनि सहन सक्ने क्षमता महिलामा कम हुने भएकोले रोग बढी लागेको अनुमान छ । डिप्रेसन रोगका बिरामी नेपालमा धेरै छन् । कतिपय बिरामीहरु सुरुमा बेलुकी पख टाउको दुख्ने, कुराहरु बिर्सने, आत्मबल घट्ने, आत्तिएको महसुस गर्ने, दुःख परेको मानिस देख्दा मन थाम्न नसक्ने हुन्छन् । मानिसहरुमा विभिन्न खालका डिपे्रसन देखापर्छन् ।
डिप्रेसनका कारण कतिपय बिरामीहरु घाँटीमा केही अड्कियो भन्ने, आफुलाई क्यान्सर भयो भनी रुने, मर्ने भइयो भनेर आत्तिने, परिवारको बारेमा कुनै चिन्ता नलिने जस्ता लक्ष्ण भेटिन्छन् । डिप्रेसनका बिरामीले आवश्यक कुरामा पनि मन थाम्न सक्दैनन्, जस्तै सडकमा एकजना बिरामी देख्दा वा मरेको मानिस देख्दा आत्तिने र चिन्तित हुने गर्छन् । डिप्रेसनका बिरामी एउटै घटनालाई आधारमानी सधैं त्यसमा अनावश्यक विवाद गर्छन्,जस्तै परिक्षमा १ पटक फेल भएमा अब सधंै फेल भइन्छ भनी आतिन्छन् जुन गलत हो ।
कतिपय डिप्रेसनका रोगी नकारात्मक सोचाई बाट पिडित हुन्छन् । मनमा यस्ता सोचाई लिन्न भनेपनि ती सोचाइ आउनाले छटपटी महसुस गर्छन् । डिप्रेसनका बिरामीको मस्तिष्कको परीक्षण सि।टी स्क्यान,यम.आर.आई गर्दा कुनै खराबी देखिदैन तर न्यूरोट्रान्समिटर,जुन अत्यन्त शुक्ष्म परीक्षण मानिन्छ । यो परीक्षण गर्दा सेरोटोनिन तथा नरइपिनेफ्रिनभन्ने तत्व मस्तिष्कमा घटेको देखिन्छ ।
समुदायका ५ प्रतिशत मानिस डिप्रेसन रोगबाट पिडित छन्, जुन पहिचान गर्न नसकिने भएकोले उपचार गर्न पाएका हुँदैनन् । समुदायमा आत्महत्या भएको घटना सुनिन्छ, यसको प्रमुख कारण डिप्रेसन नै हो ।
डिप्रेशनका लक्षणहरु :
हातखुट्टा झम झम गर्ने
पैतला पोल्ने, तालु पोल्ने
डिप्रेशनका प्रकार :
छट्पट्टि गर्ने डिप्रेशन
नबोली, नचली बस्ने डिप्रेशन
बच्चामा देखिने डिप्रेशन
वयस्कमा देखिने डिप्रेशन
बुढेसकालमा देखिने डिप्रेशन
जाडो महिनामा मात्र देखिने डिप्रेशन
दोहोरिएको डिप्रेशन आदि
यस्ता बिरामीहरु मलाई कस्तो रोग लाग्यो भनी चिन्ता गर्छन् ।
यस्ता बिरामीहरु अरु मानिस देखि शंका गर्ने गर्छन् ।
बुढेसकालमा देखिने डिप्रेसनलाई सेनाइल डिप्रेसन भनिन्छ । यस्ता बिरामीहरुले प्रायः आत्महत्या गर्ने डर हुन्छ । एक्लै बोल्ने, एक्लैे हाँस्ने पनि गर्न सक्छन् ।
यस्ता बिरामी अत्यन्त नचली नबोलि बस्छन् । कोही बिरामीहरु आँखामा आँसु बगाउछन् ।
यस्ता बिरामीहरु अत्यन्त छटपट गर्छन् । एक ठाउँमा बस्न सक्देैनन् । आत्तिने र अस्थिर मनस्थिती भएका हुन्छन् ।
यस्ता बिरामीहरु कम बोल्छन् र टोलाउने गर्छन् ।
बच्चामा देखिने डिप्रेसन
बच्चामा दखिने डिप्रेसन केही फरक हुन्छ । पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने, रिसाउने, पढ्न नजाने आदि लक्षण देखिन्छ ।
बयस्कमा देखिने डिप्रेसन
यस्ता बिरामीहरु अनेक शारीरिक लक्षण लिइ पटक पटक डाक्टरकहाँ धाउछन् ।
जाडो महिनामा देखिने डिपे्रसन
केही डिप्रेसन जाडो महिनामा मात्र देखा पर्छ । यस्तो डिप्रसनलाई जाडो महिनामा पाउने डिप्रेसन भनिन्छ । रात लामो हुनाले मेलाटोनिन भनिने हर्मोन गडबडी हुँदा यो देखिन्छ ।
करिब ५० प्रतिशत बिरामीहरुमा डिपे्रसन रोग दोहोरिने सम्भावना रहन्छ । औषधी छुटाउने, बिरामीको घरायसी वातावरण राम्रो नहुनाले र कहिले काही औषधि सेवन गर्दा गदै पनि यस्तो हुन्छ ।
डा.सि.पीसेडाई, नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ, चितवन मेडिकल कलेज